တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ၏အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်သူများမှရွေးချယ်သည့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်း ရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင်လုံတတိယအစည်းအဝေး ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပြဿနာများအား အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေများ၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ တွင်ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးအကွံ ပေးပုဂ်ဂိုလျ H.E. Mr. Hiroto IZUMI အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးအကွံပေး ပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ပွညျသူမြားမှရှေးခယျြသညျ့ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးပျေါ လြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြး ရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပငျလုံတတိယအစညျးအဝေး ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ပွဿနာမြားအား အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှဖွရှေငျး ဆောငျရှကျနမှေုမြားနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံမှကူညီဆောငျရှကျပေးမှုအခွအေနမြေား၊ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား တှငျဆကျဆံမှုတိုးမွှငျ့ရေးနှငျ့ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈမွှငျ့တငျမှု လုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးအကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွပါသညျ။
အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ Admin 0
(၇၄)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်များအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်စား ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) တက်ရောက်